Xarunta Maamulka Deegaanka Soomaalida oo Ciidanka Milatariga Itoobiya Nabadgaliadeeda la Wareegeen. – Rasaasa News
August 25, 2018 – waxaa xaruntii maamulka deegaanka Soomaalida nabadgaliyadeeda la wareegay ciidamada milatariga Itoobiya. Ciidamadan oo aad u hubaysan ayaa gaaf wareegay gudaha iyo dibada xarunta, kadib kolkii loo sheegay ciidamada Liyu Police-ku in ay iskaga guuraan xarunta.
Ciidamada milatariga ayaa ka wada xarunta baadhitaan xoog leh, waxaa kale oo la kala diray dhamaan shaqaalihii ka hawlgali jiray xarunta.
Warku wuxuu intaasi ku daray in shalay galabtii laga taagay xarunta ismaamulka Soomaalidu calankii hore ee deegaanka.
Madaxwaynaha cusub, Mustafe Cagjar ayaa Addis Ababa ka sheegay maalintii la magacaabay in uu soo celin doono; calankii hore ee deegaanka, heestii calanka, magacii deegaanka iyo fasaxii Jamcaha. Arimahan ayaa u baahan in loogu magac bixiyo baarlamaanka deegaanka Soomaalida oo sixiixi doona todobaadyada soo socda.
Arimahan hada dhacaya ayaa waxay caan ka yihiin deegaanka Soomaalida in kolba cidii timaada hogaanka maamulka ay samayso waxa ay doonto iyada oo ayna ka imanin dood iyo in la iswaydiiyo sharciyada.
Afratan arimood ee uu qaatay maanta Madaxwayne Cagjar, waxaa la anisxiyey 1993, xiligaas oo ahayd xiligii ugu horaysay uguna dambaysay oo ay Soomaalidu iyadu samaysato waxa ay kuligeed raali ka tahay.
Maydka Ruux Soomaali ah oo Laga Helay Saaka Suuqa Jijiga